कसरी डिज्नी प्लस त्रुटि कोड Fix 83 लाई ठीक गर्ने? - कसरी
कसरी डिज्नी प्लस त्रुटि कोड Fix 83 लाई ठीक गर्ने?
त्रुटि कोड far 83 अबसम्म त्रुटिहरूको समुद्रको बीचमा डिस्ने + प्रयोगकर्ताहरूमाथि सबैभन्दा धेरै सामना गरिएको छ।यो समस्याको कारण पूर्ण रूपमा अलिखित छ जुन यस समस्याको कारण हो र यसमा थप्नको लागि कि यदि तपाईं अनुप्रयोगमा पहुँच गर्न सक्नुहुन्न यो त्रुटि देखा पर्दछ, यो तपाईंलाई रोक्दछ जब तपाईं डिज्नी + मा प्रवेश गरे सोझै तपाईंलाई रोक्दछ।
के कारण डिस्ने प्लस त्रुटि कोड Sh 83 देखाउँदछ:
यदि हामी यस मुद्दाको बारेमा डिज्नी + हेल्पडेस्कलाई सोध्छौं भने उनीहरूसँग धेरै सिधा अगाडि हुन्छ उत्तर यो गर्न।सबै तिनीहरूले उल्लेख गरेका छन् कि यो मूल रूपमा एक होउपकरण अनुकूलता मुद्दा, जडान त्रुटि, वा एक खाता मुद्दा आफै। के कारण विशेष गरी यो त्रुटि पप अप हुन्छ उल्लेख गरिएको छैन।
डिज्नी प्लस त्रुटि कोड Fix 83 फिक्स गर्न उत्तम विधिहरू:
मा हेर्दै डिज्नी + हेल्पडेस्क पृष्ठ यस त्रुटि को बारे मा हामी राम्रो को लागी त्रुटि कोड ठीक गर्न केहि छिटो र सजिलो तरीका सूचीबद्ध गरेका छौं। दिईएको निर्देशनहरू ठीकसँग पालना गर्नुहोस् र कुनै समय तपाईं डिज्नी + को डिजिटल सामग्रीको समुद्रमा जान सक्नुहुन्न।
विधि १: डिज्नी + को सर्भर स्थिति जाँच गर्दै
धेरै चोटि, के हुन्छ भनेर त्यहाँ प्रयोगकर्ताको अन्त्यबाट कुनै समस्या आएको छैन, सम्भावना यो छ कि डिस्नेको सर्भर आफै तल हो + यदि त्यस्तो हो भने कुनै पनि अन्य समस्या निवारण विधि प्रयोग गर्नु बेकार हुनेछ।तिनीहरूको सर्भर स्थिति जाँच गर्न क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ यहाँ र यसले तपाईंलाई प्रत्यक्ष स्थिति देखाउँदछ।
नोट:निश्चित गर्नुहोस् कि तपाइँ विन्डोको दायाँ पट्टि तपाइँको देश छान्नुहुन्छ।
के युट्यूब डाउन छ? प्रत्यक्ष स्थिति जाँच गर्नुहोस्
के नेटफ्लिक्स अहिले तल छ? स्थिति जाँच गर्नुहोस्
विधि २: ईन्टरनेट कनेक्टिविटी जाँच गर्दै
एकचोटि हामीले सर्भरको मुद्दालाई काटिसके पछि, हामी अर्को चरणहरूमा जानका लागि स्वतन्त्र हुन्छौं। निम्नले एउटाले यन्त्रको इन्टर्नेट जडान जाँच गर्दैछ जसमा तपाईं + डिज्नी पहुँच गर्न कोशिस गर्दै हुनुहुन्छ।केहि उपकरणहरूमा इन्बिल्ट सुविधा हुन्छ इन्टरनेटको गति जाँच गर्नका लागि। यदि तपाईंको उपकरणसँग त्यस्तो सुविधा छैन भने, तपाईं भ्रमण गर्न सक्नुहुन्छ ukla द्वारा गति परीक्षण तपाइँको इन्टर्नेट ब्राउजर मार्फत वा तपाइँ पनि डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छशीघ्रतपाईंको उपकरणको अनुप्रयोग स्टोरबाट अनुप्रयोग।
विधि:: उपकरण अनुकूलता जाँच गर्दै
डिज्नी + धेरै उपकरणहरूमा उपलब्ध छ तर सबै होईन। तपाईंले सुनिश्चित गर्नु आवश्यक छ कि तपाईंले प्रयोग गरिरहनु भएको डिज्नी + चलाउन सक्षम छ। यसलाई जाँच गर्न, तपाईं क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ यहाँ ।
विधि:: ब्राउजर अनुकूलता जाँच गर्दै
एकचोटि तपाईंले यो सुनिश्चित गर्नु भयो कि प्रयोग भइरहेको उपकरण उपयुक्त छ र ईन्टरनेट कनेक्शन पनि राम्रो छ। तपाईंले यो निश्चित गर्नु आवश्यक छ कि तपाईंले प्रयोग गरिरहनु भएको ब्राउजर पनि उपयुक्त छ। यसलाई जाँच गर्न, क्लिक गर्नुहोस् यहाँ ।
विधि:: उपकरण पुन: सुरू गर्दै
एक उपकरण एक लामो समय को लागी चलिरहेको छ, यसले केहि अस्थायी फाईलहरू सिर्जना गर्न सक्छ जसले Disney + लाई सामान्य रूपमा चल्नबाट रोक्न सक्छ। रिस्टार्टिंग विधिले मुद्दालाई सुल्झाउने ग्यारेन्टी प्रदान गर्दैन तर यो यति सजिलो र छिटो छ, यो पक्कै पनि प्रयासको लागि योग्य छ।
विधि:: डिज्नी + अनुप्रयोग अपडेट गर्दै
यदि तपाईले प्रयोग गरिरहनु भएको अनुप्रयोग पुरानो हो भने, यसले पप अप गर्न त्रुटि कोड to 83 हुन सक्छ। अनुप्रयोग अद्यावधिक गर्न र अनुप्रयोग पुन: सुरुवात गर्न प्रयास गर्नुहोस्।
विधि 7: डिज्नी + अनुप्रयोग पुन: स्थापना गर्दै
यदि अनुप्रयोग अप टु डेटमा छ र तपाईंले त्रुटि कोड getting getting प्राप्त गर्दै हुनुहुन्छ, सम्भावनाहरू यो छन् कि त्यहाँ तपाईंको उपकरणमा अनुप्रयोगको कुनै प्रकारको भ्रष्ट फाइल अवस्थित हुन सक्छ। यस मुद्दालाई ठीक गर्न, अनुप्रयोगसँग सम्बन्धित सबै डाटा मेटाउनुहोस् र स्थापना हटाउनुहोस्। अनुप्रयोग फेरि डाउनलोड गर्नुहोस् र ताजा चलाउनुहोस्।
विधि:: उपकरण अपरेटिंग सिस्टम अपडेट गर्नुहोस्
जसरी अनुप्रयोग अपडेट गर्न आवश्यक पर्दछ, अपरेटि system प्रणाली जुन यो चल्दै छ, अप टु डेट राख्नुपर्नेछ। पुरानो ओएसले त्रुटि कोड up 83 देखाउनको लागि पनि कारण बनाउन सक्दछ। तपाईंको ओएसको लागि सम्भावित अपडेटहरूको लागि जाँच गर्नुहोस् र अपडेट गर्नुहोस्।
विधि:: फरक डिस्ने + खाता प्रयोग गरेर हेर्नुहोस्
यदि माथिका सबै चरणहरू काम गर्दैनन् र समस्या अझै पनी जारी छ भने, पूर्ण डिज्नी + खातासँग लग इन गर्ने प्रयास गर्नुहोस्। हामी यो चरण सुझाव दिन्छौं किनकि संभावनाहरू यो छ कि तपाईले प्रयोग गरिरहनु भएको खातामा यसमा केही प्रकारको समस्या हुन सक्छ। हो, यो सम्भव छ।
१ क्यू मेरो उपकरण डिज्नी प्लससँग उपयुक्त छ कि छैन भनेर कसरी जान्ने?
बर्ष:तपाईं क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ यहाँ उपयुक्त उपकरणहरूको पूर्ण सूची प्राप्त गर्न।
२Q के हुन्छ यदि यी सबै उल्लेखित चरणहरू डिस्ने प्लस त्रुटि कोडको लागि काम गर्दैनन् भने?
बर्ष:तपाईं आधिकारिक मद्दत केन्द्र भ्रमण गर्न सक्नुहुनेछ तिनीहरू सिधा सम्पर्क गर्न यहाँ ।
डिज्नी + मा पहुँच गर्दा सबै भन्दा सामान्य त्रुटि देखा परेको कारण, त्रुटि कोड 83 मा धेरै साधारण समस्या निवारण चरणहरू छन्। धेरै जसो उनीहरूले मुद्दा हल गर्छन्, यो अति दुर्लभ परिदृश्य हो कि खाता बदल्नु पर्ने हुन्छ।आशा छ कि हामीले तपाईंको समस्या समाधान गर्न मद्दत गरेका छौं। तल टिप्पणी अनुभागमा आफ्नो विचार साझा गर्न स्वतन्त्र महसुस गर्नुहोस्।
एन्ड्रोइड टिभी बक्सका लागि उत्तम अनुप्रयोगहरू
सजिलो चलचित्र नि: शुल्क डाउनलोड
यूट्यूब टिभी प्रोमो कोड २०१
पीसी विन्डोज १० को लागी bluestack
कसरी यूट्यूब देश प्रतिबन्ध बाइपास गर्न
ITunes आईफोनमा जडान हुँदैन